IS XISAABI INTA AAN LAGU XISAABIN; Qormo Cajiib Ah (Cabdilahi Nuur Colombo) | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA IS XISAABI INTA AAN LAGU XISAABIN; Qormo Cajiib Ah (Cabdilahi Nuur Colombo)
IS XISAABI INTA AAN LAGU XISAABIN; Qormo Cajiib Ah (Cabdilahi Nuur Colombo)
Marka aad geeriyooto waa laguu meeyri, ka dibna maro cad ayaa lagugu karfani. Gurigaa lagaa saari markaasa god dhulka hoosti ah lagu galin. Dad badan ayaa maalintaa wax kasta faraha ka qaadi-doona si ay guriga cusub kuugu dhisaan, shaqooyinkii ay hayeen maalintaa aan tegi doonin si ay aaska uga qayb qaataan.
OGOW .. Dunidu kuu murugoon mayso. Ganacsiguna wuu sii socon-doonaa. Shaqadii aad hayseyna qof kale ayaa qaban. Alaabtaada waa la kala qaybsan ama la daadin. Maryaha kuwaad ugu jecleedna waa la kala qaadan ama lagu sadaqaysan haddii aan la kala boobin .. Xoolaha aad lahaydna waa la kala qaybsan. Adna ILLAAHEY ayaa kugula xisaabtami meesha aad ka keentay iyo meesha aad ku bixisay.
Asxaabtaadu inta ay dhowr saacadood murugoodaan ayey noloshooda wadan-doonan. Reerka aad ka baxdayna dhowr todobaad oo ay kuu murugoodaan ka dib sidoodi hore ayey iskaga noqonayaan oo sidaas ayey sheekadaada aduunyo ku xirmaysa .. Markaas ayey sheekada Aakhiro furmaysa.
Amaan wax ku tari mayso, xan iyo in wax laga sheego waxba ku yeeli mayso. Su’aasha is waydiinta leh waxay tahay: Aakhiro maxaad u diyaarsatay? Waa xaqiiqda u baahan in haatan inta la noolyahay laga shaqeeyo.
Walaal weligaa laba iska ilaali: SALAADA oo aad ku ciyaarto iyo maalka xaaranta ah. Dib isku waydii oo isla xisaabtan intaan lagula xisaabtamin. Haddii aad bar madow ku aragtid buugaaga waa inaad ka qoomamaysaa.
Waxaa qoray Cabdullahi Nuur Colombo